Madaxweyne Xasan Sheekh oo soo dhoweeyay warbixintii HRW
Home Somali News Madaxweyne Xasan Sheekh oo soo dhoweeyay warbixintii HRW
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhoweeyay warbixintii shalay ay soo saartay hay’adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch.
Warbixinta oo loogu magac-daray ‘La-haystayaasha Ilaalada Xeryaha’ waxay ka hadleysaa xadgudubyo ka dhan ah barakacayaasha ku jira xeryaha Muqdisho.
War-qoraal ah ayuu madaxweynaha ku sheegay in asaga iyo dowladdiisa ay soo dhoweynayaan warbixinta faahfaahsan ee ay ee Human Rights Watch uga warantay dhibaatada ay barakacayaasha Muqdisho la kulmeen sanadkii 2011-2012kii.
Waxa uuna xusay madaxweynuhu in xadgudubyada ay dadku sheegeen ay yihiin kuwo xanuun badan oo aan gabi ahaanba la aqbali karin in lagula kaco dadka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha wuxuu sheegay in ficillada noocaas oo kale ah ay yihiin wax aan sinnaba loo aqbali karin, kana soo horjeeda dhaqanka dadka Soomaaliyeed.
“Waxaan si furan u sheegay haddana ku celinayaa, inay iga go’an tahay soo celinta ammaanka dadka rayidka ah ee ku nool Soomaaliya iyo la xisaabtamidda kuwa lagu helo xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha,” ayuu madaxweyne Xasan ku sheegay war-saxaafadeedka.]
Wuxuu intaas raaciyay in caqabadaha hor yaalla dowladdiisa ee dib u dhiska dalka ay yihiin kuwa baaxaad weyn leh, wuxuuna ka codsaday saaxiibbada iyo taageerayaasha Soomaaliya inay ka caawiyaan dowladda federaalka la tacaalidda mushkiladdan.
Warbixinta waxay sheegtay in dhinacyada hubeysan, oo ciidanka dowladda ay ka mid yihiin ay geystaan gaboodfallada ka dhanka ah dadka barakacay ee dhibaateysan.